Ekpere maka onyinye na otu ụzọ n'ụzọ iri. ? Ihe Nlereanya Dị Ike
Ekpere maka onyinye N’oge ibuga ngwongwo anyị n’ihu ọnụnọ nke Onyenwe anyị, ọ dị ezigbo mkpa.
Enwere ike ịhapụ onyinye n’ebe ịchụ aja nke ụka ma ọ bụ n’ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ anyị nwere ike inye ha otu onye kpọmkwem mana anyị ga-eburu n’uche mgbe niile na Onye-nwe kwesịrị ka anyị nweta uru ego anyị.
Nke a bụ ụkpụrụ anyị na-ahụ n’ime Bible ma na-eweta ngọzi bara ụba na ndụ anyị. N’inye onyinye anyi n’enye onyinye amara nke anyi n’enye n’amara ma kwesiri iji obi joyuria mee ya n’ihi na obu ihe a bu Onye n’inye Jehova gozie.
1 Ekpere maka onyinye na otu ụzọ n’ụzọ iri
2 2) Ekpere igwa Chineke
3 3. Ikpe ekpere maka onyinye
3.1 Gịnị bụ ekpere maka onyinye?
3.2 Etu esi ekpe ekpere maka onyinye ndi Kristian?
Ekpere maka onyinye na otu ụzọ n’ụzọ iri
«Nna nke Eluigwe,
Taa, anyị na-ewetara onyinye anyị nke kacha mma na ego anyị na-emepụta.
Anyị ewepụtawo otu akụkụ nke uru anyị, na otu ihe ịgara anyị nke ọma.
Jiri obi uto na-enye gị ihe n’ụbọchị a.
Anyị ejirila egbugbere ọnụ anyị kwere nkwa na anyị ga-efe gị, yabụ anyị ji aka gị wepụtara gị onyinye anyị.
Anyị ghọtara na nke a bụ oge dị mkpa n'ihu gị, anyị ji nkwanye ugwu leba anya n'ihe anyị nyefere anyị taa.
Chineke, anyị na-enye otuto n'ihi aha gị; Ọ bụ ya mere anyị ji eweta onyinye ndị a ma bịa n'ụlọ ikpe gị.
Daalụ maka imezigharị na ịsacha ndụ anyị, n'ihi na taa anyị ghọtara na a na-enye onyinye ndị a n'ikpe ziri ezi maka ịdị ukwuu gị yana ọbụbụeze gị.
Ka ngosipụta nke ofufe anyị dị gị mma.
Ayi ji otuto nye aha anyi, anyi n’eweta onyinye anyi, bia n’iru gi; anyi na ekene gi ife Onyenwe anyi!
Taa anyi g’enwe obi uto n’inye onyinye n’onyinye afọ ofufo, n’ihi na anyi ji obi anyi dum mee nke a.
Kpee ekpere maka inye onyinye na otu ụzọ n'ụzọ iri nke okwukwe siri ike.
Onyinye na otu ụzọ n’ụzọ iri bụ ụkpụrụ nke Akwụkwọ Nsọ nke na-eme naanị site na mkpughe n’ihi na ọ na-abụkarị mba a na-akatọ onye nwere ụkpụrụ ndị a ma na-etinye ha n'ọrụ ná ndụ ha kwa ụbọchị.
N’ime Akwụkwọ Nsọ anyị hụrụ na ndị na-etinye otu ụzọ n’ụzọ iri bụ ndị na-eme nke ọma na ndụ niile.
Onyinye nwere ike ịbụ ihe niile si n’obi anyị, mana otu ụzọ n’ụzọ iri, nke bụ nke Onye-nwe, nwere pasenti iri n’uru nke uru anyị, ma ọ bụ ego ma ọ bụ n’ụzọ ọzọ.
Okwu ahụ na-akuziri anyị na Chineke n’onwe ya baara onye na-eripịa ihe n ’anya anyị ma ọ bụrụhaala na anyị na-erube isi site n’iwepụta otu ụzọ n’ụzọ iri n’oge na n’obi ọ fullụ zuru oke.
2) Ekpere igwa Chineke
«Onye-nwe-ekele n’ekele gị maka ihe ị nyere m, maka ihe niile I mere ka m too.
Ama m na oge ụfọdụ anaghị m ekele gị nke ukwuu, mana oge a ka m ga-anọ.
Ihe obula m n’enwetara taa ekeleala gị.
I meela ka m bụrụ ezigbo mmadụ.
Daalụ maka ezinụlọ m, ndị enyi m, ezigbo ndị m.
Daalụ maka inye m ụbọchị ọzọ nke ndụ,
Otu ubochi iji too gi ma kwanyere gi ugwu, hu gi n'anya.
Na-enweghị gị ọ gaghị abụ onye ọ bụla, daalụ Onyenwe anyị.
Enweghị m ike ịkwụ gị ụgwọ m ji, iji kwụọ gị ụgwọ ihe niile i nyere m.
Onyinye ndị a, ọ bụrụgodị na anyị hapụrụ ha n'ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ nye ya onye ọzọ, ọ bụ otu Chineke ahụ ka ọ nara ya n’eluigwe Ọ ga-enyekwa anyị ụgwọ ọrụ dịka akụnụba ya onwe ya siri dị.
Oku a bu ka anyi were obi di nma nye onyinye a n'ihi na okwu a gwara anyi na ya goziri onye na - enye ya obi uto, ya mere anyi enweghi ike iji obi juputa obi ma ju anyi obi.
3. Ikpe ekpere maka onyinye
Taa, anyị na-ewetara onyinye anyị na onyinye ebere anyị kacha mma na ego anyị na-arụ.
Anyị edebewo akụkụ nke ihe anyị nwetara,
otu ị nyeworo anyị maka ime ka anyị nwee ọganihu.
Jiri obi uto na ihu ihe anyi n’enye gi n’ulo a.
Anyị ejirila egbugbere ọnụ anyị kwere nkwa na anyị ga-ejere gị ozi,
Ọ bụ ya mere anyị ji obi anyị niile na-ewetara gị onyinye anyị.
Anyị ghọtara na nke a bụ oge emume n'ihu gị,
anyị were nkwanye ugwu mesoo ihe anyi n’efe.
Chineke, anyị na-enye otuto n'ihi aha gị;
Ọ bụ ya mere anyị ji eweta onyinye ndị a wee bịa n'ụlọ nsọ gị.
Daalụ maka ịdị nro, sachapụ ma chekwaa ndụ anyị,
n’ihi na taa anyị ghọtara na a na-enye onyinye ndị a n ’ikpe ziri ezi maka ịdị ukwuu gị yana ọbụbụeze gị.
Anyi n’enye gi otuto n’ihi aha gi mgbe anyi n’eweta onyinye anyi, bia n’iru gi, anyi na-efe gi onye nwe anyi.
Taa, anyị ga-anụ ụtọ inye onyinye afọ ofufo na onyinye afọ ofufo, n'ihi na anyị ji obi anyị dum mee nke a.
N’uche a ka ayi hu na otu okwu Chineke juputara n’uche di iche. Otu n’ime ha na nke kachasị ike anyị hụrụ ya n’ime otu Abraham onye amara dịka nna nke okwukwe, a nwalere ya wee nwee ike ịnapụta nwa nke ya ma ọ bụrụ na Onye-nwe enyeghị ya nwa ehi iji chụọ ya.
N'ebe a anyị na-ahụ ọmụmaatụ nke nrubeisi ma dịkwa ka nke a enwere ọtụtụ ndị ọzọ ebe anyị ga-esi mụta nkuzi dị mkpa maka ndụ anyị niile.
Gịnị bụ ekpere maka onyinye?
Anyị na-ekpe ekpere n'oge ịchụ aja wee ka Jehova gọzie omume anyị. Bebụ otu Chineke anyị na - eme ka akụ na ụba dị ukwuu, ka o duzie anyị ka anyị nye ya onye chọrọ ya ka anyị nwee ọchịchọ ahụ n'obi anyị mgbe niile ịchụ àjà.
Ọ dị mkpa ịmara na onyinye anaghị abụ ego mgbe niile mana enwere ike iji ya mee ihe ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ihe a na-ahụkarị bụ ịhụ mkpụrụ osisi ma ọ bụ onyinye ifuru ma Onyenwe anyị na-anata ha niile.
Etu esi ekpe ekpere maka onyinye ndi Kristian?
Nke a, dị ka ekpere niileEkwesịrị ime ya site na obi anyị na ịmara nke ọma ihe anyị na-eme.
Ọtụtụ oge, dịka onyinye ahụ bụ nke anụ ahụ, anyị amaghị na ọ bụ omume nke mmụọ ma nke a bụ ụkpụrụ nke anyị enweghị ike ichefu n'ụzọ ọ bụla n'ihi na ọ bụ Chineke n'onwe ya na-anata onyinye anyị na onye ga-enye anyị ụgwọ ọrụ dịka akụ ya dị otuto
Ekpere maka onyinye na ike otu ụzọ n'ụzọ iri bụ iji okwukwe na - emena-ekwere na Chineke n’onwe ya na-ege anyị ntị ma bụrụkwa n’onwe ya onye na-enye anyị azịza nke ihe anyị na-arịọ, ma ọ bụ nke anụ ahụ ma ọ bụ nke mmụọ, anyị ga-ekpegara mkpụrụ obi oge niile ma soro Chineke kere ihe niile dị ike na onye nwe ihe niile. .